Nothing | K
This entry was posted in Nothing and tagged Birthday, Miku, Rina on December 8, 2012 by K.	HALLOWEEN JUNKY ORCHESTRA [HALLOWEEN PARTY ]
Leaveareply	Happy Halloween ~ Mina! Finally, we can listen Hyde Halloween Junky Orchestra where also Rina also acted. This one isn’tavideo clips, but I am sure JRock lovers might love this single! Saikou! Totally matches the Halloween. Trick or Treats!
This entry was posted in Nothing and tagged Download, Halloween on October 28, 2012 by K.	MMOtaku အတွက် Design အသစ်
Leaveareply	MMOtaku Theme အသစ်ရေးဖို့ ဟန်ပြင်နေတာကြာပြီ။ ကြားထဲမှာ Kami ပြောပြောလွန်းလို့ ရေးထားတာ တစ်ခုတောင် ရှိသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် မကြိုက်တာနဲ့ အခု အစအဆုံး ပြန်ဆွဲနေတယ်။ အခုသုံးထားတဲ့ MMOtaku Theme မှာက Error တွေအများကြီးပဲ။ ပထမဆုံးပြောင်းတဲ့ WordPress Theme ဆိုတော့ ဒီလောက်တော့ ရှိမှာပေါ့ ဆိုပြီး ကိုယ့်ဟာကိုယ် ပြောရတာပဲ။ အခု ဒီတစ်ခေါက်တော့ ဘာပဲပြောပြော Perfect မဖြစ်ရင်တောင် အားလုံး အဆင်ပြေပြေ ဖြစ်အောင် ကြိုးစားရေးနေတယ်။ WordPress ပြောင်းတာက မခက်ဘူး၊ မကြာဘူး။ အဲ့ဒီ HTML နဲ့ Design စဉ်းစားနေတာပဲ ကြာတာ။ ^^
လောလောဆည်တော့ အခုအဆင့်လောက်ထိတော့ ပြီးပြီ -
Currently working on this one!
Hompage ကတော့ ဘာထည့်ရင်ကောင်းမလဲ စဉ်းစားနေတုန်းပဲ။ Facebook Likebox လောက်ထည့်လိုက်ရင်တော့ ပြည့်စုံပြီထင်တာပဲ? Homepage ပြီးရင်တော့ စိတ်အေးပါပြီ။ ကျန်တာတွေက အဲ့လောက် မခက်တော့ဘူး။ Homepage မှာလဲ တစ်ခုလောက်ပဲကျန်တာ။ Post Loop တွေ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ အဖြေရသွားရင် OK ပြီ။ နောက် Search တော့ ထည့်သင့် မထည့်သင့် စဉ်းစားနေတုန်းပဲ။ ဘာပဲပြောပြော Anime တွေတော့ ဒီ Theme ပြီးမှပဲ ပြန်ကြည့်ဖြစ်တော့မယ့်ပုံ! T_T
This entry was posted in Nothing and tagged Design, mmotaku on July 4, 2012 by K.	ပဋ္ဌာန်း
Leaveareply	amazonkindle သမားတွေအတွက် ‘ပစ္စယနိဒေ္ဒသပါဠိ’ အကျယ် ကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သူငယ်ချင်းကြီး ရန်နိုင် ကနေ အစအဆုံး ပြန်ရိုက်ထားပြီး PDF format ပြန်ထုတ်ပေးထားပါတယ်။ kindle အတွက် သီးသန့်ရေးထားတာမို့ တခြား Devices တွေနဲ့တော့ Font Size တွေ အရမ်းကြီးနေနိုင်တယ်။ စုစုပေါင်း စာမျက်နှာ ၁၄ မျက်နှာရှိပြီး Font ကို Zawgyi-One အသုံးပြုထားပါတယ်။
Shot from amazonkindle
This entry was posted in Nothing, Novel and tagged buddha, pdf on July 3, 2012 by K.	Nami at Junction Squre